Yoolalka ayaa ku sii kordhaya gobolka Banaadir - Axadle - Axadle Wararka Maanta
By Abdiwahab Ahmed	 On May 21, 2021
Muqdisho (Axadle) – Maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa ku soo kordhay shaqo joojinta iyo mushaar dhimista kadib cadaadis gobolka uu saaray shaqaalaha howl gabka ah ee madaxweyne Farmaajo.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Axadle u sheegay in 70 ka mid ah dadka shaqada laga ceyriyay oo ka tirsanaa dowladda hoose ay ahaayeen shaqaale dowladeed ama kuwa aan ka tirsanayn amniga.
Maamulka degmada kuma uusan shaqeynin go’aanka shaqada looga ceyrinayo shaqaalaha dowladda, laakiin waa in lagu jiheeyaa fikradaha kala duwan ee dadka iyo la taliyayaasha siyaasadeed ee ka shaqeeya gobolka.
Shakhsiyaadka ay kafaala qaadaan siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo odayaasha dhaqanka ee taageera siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sidoo kale la bartilmaameedsanayaa. Qaar badan oo ka mid ah shaqo joojinta ayaa midho dhal noqon waayey qaarna waxay ka baqayaan inay la hadlaan warbaahinta si aysan u noqon bartilmaameed dheeraad ah.
Axadle ayaa 7-dii July baahisay in Maamulka Gobolka Banaadir uu shaqada ka joojiyay 21 ka mid ah Shaqaalaha Gobolka Banaadir.
Inta badan dadka shaqada laga eryay waxaa soo xushay Axmed Iimaan iyo Ibraahim Dheere oo ah labada gudoomiye ku xigeen dhanka maaliyadda ee gobolka Banaadir oo hadda la shaqeeya qaraabadooda Xasan Cali Kheyre.
Maxamed C / llaahi Tuulax, Senator Dhagey iyo Mustaf Dhuxulow oo hadda la sheegay inay mucaarad ku yihiin dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa qortay koox kale.
Tani waxay ka hor imaaneysaa heshiis ay wada gaareen raiisul wasaare Robe iyo mucaaradka in aan la bartilmaamedsan dadka ka soo horjeeda.
Abdiwahab Ahmed 3181 posts